Article submitted by: Thunderbolts on 4-Nov-2013
ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ် လိုခြင်လို.လား?
မျိုးချစ် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် များ။
မျက်နှာမှာ သနပ်ခါး - ပေါင်မှာသေးစီကြောင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ? မြန်မာဆိုရင် သိကြမှာပေ့ါ ။
(အရေးကြီးတာက ဒီနေ.မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်ကထက် ပိုပြီး သောက ဖြစ်စရာ တွေ ၊ စိုးရိမ်စရာ တွေ ရှိလာနေတယ် ၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ကိုယ်အရိုးနဲု့.ကိုယ် အထိုးခံနေရ တယ် ၊ ကိုယ့်ဆီနဲ့ကိုယ် အကျော်ခံ နေရ တယ် ဆိုတာ သိထားကြဘို.လိုတယ်) တဲ့။
၀ိပါတ်ဒါဏ်ကြောင့် ၀ဋ် ကပ်တယ် လို.ပြောခြင် ရင်ပြော ။“ မြွေ မှန်ရင် တွင်းဝင် ဖြောင့်လိမ့် မယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားအရ မြွေ မမှန်ရင် တွင်းဝင်မဖြောင့်ဘူး ဆိုတာဘဲ၊ ဒီ စကားကို ပြင်ဆင် ပြီးပြောရရင် တော့. ဘ၀ဲ (Octopus ) မှန် ရင် ဘယ်တွင်း ၀င်ဝင် ဖြောင့် လိမ့်မယ် ၊ ဘ၀ဲ အကောင်ဟာ အရိုး မပါ လက် ဂ ချောင်းနဲ. ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်များတဲ့ ရေသတ္တ၀ါ တ ကောင် ဖြစ်တယ်။ ။
ဒီနေ.မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ခေတ်မီရေး တိုးတက်ရေးဆိုတာတွေ ဟာ နေ.ချင်း ညဉ့်ချင်း ဆိုသလို. ပေါ် လာတာမို. တကယ်မှ ဟုတ်ရဲ.လား. အိပ်မက် တွေ မက်နေတာလား ။ အိပ်မက်ယောင် နေတာ များလား လို.တောင် ထင် မှတ်နေရတယ် ။ တနေ.မှာ အိပ်မက်လို ဘဲ ပျောက်သွားမှာလား ဆိုတာကို လဲ စိုးရိမ်မိတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလက် ခေတ်မီ တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေးဟာ မြန်မာတွေ ပေါ်မှာတည် တယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ သား အား လုံးပေါ်မှာတည် တည်တယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံ အေးချမ်းသာယာမှုပေါ်မှာတည်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းမှုတွေက ချိန်းချောက် နေဆဲဘဲ ဖြစ်တယ် အနောက် နိုင်ငံအုတ်စုကလဲ ဒီမိုကရေစီတွေ လူအခွင်.အရေးဆိုတာတွေ တကျော်ကျော် နဲ့တွေ စောင့်ကြည့်ပြီး သူတိုလိုတဲ့ လူ သူတိုလိုတဲ့ ပုံစံသွင်းနေကြတယ်။ သူတိုမှ သြဇာ မပေးရရင် ဆရာမလုပ်ရရင် သူတိုသြဇာ မခံဘဲ မြန်မာတွေ ဘာမှမလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင် အောင်ရှိနေရတယ်၊ ဒါနဲ.တောင်လဲဘဲ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်မှု ၊ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန် တည်း မှူု ရှိရမယ်လို. သူတိုကဘဲ လူကြား ကောင်း အောင် အရှက်မရှိ အော်နေသေး တယ် ၊ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ခေါင်းဆောင်တွေကို သူတိုစိတ်နဲ့ မကိုက်ရင် နိုင်ငံရော လူပါ ဖျောင် ပစ်လေ.ရှိတယ် ၊။
မောင်ဖြူရယ် မင်းဖြူတယ် ဆိုတိုင်း မဖြူပါဘူး၊ ငါဖြူမှ ဖြူတာပါလို. အင်္ဂလိပ်
အရေးပိုင်က မင်းစေပြာတာ မောင်ဖြူ ကို ပြောခဲ့တယ် တဲ့။ ၁၉၄၁ မှ ၁၉၄၆ ခုနှစ်က ဗမာပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ ဘုရင်ခံ ဟာ အသက် ၄၂ နှစ် သာ ရှိသေး တဲ့ အိုင်းရစ်(ရှ) Irish လူမျိုးစုဝင် ဗိုလ်မှုးကြီး Sir Reginal Dorman-Smith ဖြစ်တယ်လို. သိရ တယ် ၊ Dorman Smith ဟာ ပါးကွက်သားကြီး ဦးစောနဲ့ လဲ ပုလင်းတူ ဘူးစို. အတော် ရင်းနှီးတယ် တဲ့။ ဦးစော ကဘဲ မြစ်ကြီးနား လေယဉ်ကွင်းကို အမေရိကန်နဲ့ ကူမင်တန် တရုတ် အစိုးရတို. အလိုကျ သုံးခွင့်ပြု ခဲ့တာတွေ ရှိတယ် ၊ ဒီအချက် ကိုဖေါ်ပြရ တာက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနဲ့ ဂျပန်တပ် တွေ ၀င်လာ လို.အင်္ဂလိပ် ဘုရင်ခံနဲ့ အလိုတော် ရိတွေ ထွက်ပြေး ကြတာမှာ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို က ဖြစ်တယ်။
ကချင် တွေဟာ မူလ နတ်ကိုး ကွယ် သူတွေ အဖြစ်က အမေရိကန် နှစ်ချင်း ခရစ်ယန် သာသနြာ့ပု ဂိုဏ်း ရဲ့ ကြိုး ပန်း ချက်ကြောင့် ခရစ်ယန် ဘာသာဝင် တွေ ဖြစ်လာကြ တယ် ၊ သာသနာပြုတွေက အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ နဲ့ ကချင် စာပေ တည်ထွင်ပေးတဲ့အပြင် ၊ ခရစ်ယန် ကျမ်းစာအုပ် ကိုလဲ ကချင်ဘာသာ နဲ့ ဘာသာပြန် ရိုက် နှိပ်ခဲ့တယ် ။ မြစ်ကြီးနားမြို.ဟာ သမိုင်းဝင်မြို.တမြို. ၊ အထူး သဖြင့် အင်္ဂလိပ် အမေရိကန်တို.ရဲ့ ၀င ပေါက်ထွက်ပေါက် ဆိုရင် မမှား ဘူး ၊ ကချင်တွေနဲ့ အင်္ဂလိပ် အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး ဆက်သွယ်မှု တွေကို ရှာဖွေ လေ့လာ ကြည့်ကြ စေလိုတယ် ၊ ဒီနေ. ဖြစ်နေတဲ့ ပဋီပက္ခ တွေကိုလဲ နားလည် သဘော ပေါက်ကြလိမ့်မယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ဘာကြောင့် ခက်ခဲနေရ သလဲ ဆိုတာ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်နိုင်တယ် ။
ဆက်ပြောရရင် နိုင်ငံကြီး တချို.ဟာ ဒို.မြန်မာတွေ နိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးတာ တောင် သူတို.မှာ နိုင်ငံ ဆိုလို. ခေါ်စရာ မြေတောင်မရှိသေး ။ သူများတွေကို သတ် သူများမြေ ကိုလုပြီး နိုင်ငံတည်ထောင် ကြတာပါ။ ဌာနေ မူရင်း တိုင်း ရင်းသား လူမျိုးစုတွေကိုလဲ မတရားနှိပ်စက် ငြင်းပန်း သတ်ဖြစ် အဓမ္မ မုဒိန်းကျင့်၊ အခြား အနိုင်ကျင့်မှူ အမျိုးမျိုး ကျင့်ခဲ့တာတွေ မျိုးဖြုတ် ခဲ့တာ တွေ ကမ္ဘာက သိတယ်။ အခုလဲဘဲ သူများတိုင်း နိုင်ငံ တွေမှာ ဆက်ပြီး ကျူးလွန်နေ တုန်း ဘဲ ဆိုတာတွေ ကို မြင်မြင် ဒိတ္ထတွေ.ရတယ် ၊ သူတို. အကြောင်း ဖေါ်ကောင်တွေက ဖေါ်ထုတ် နေကြ လို. ဒီဖေါ် ကောင်တွေကို နိုင်ငံတော် သစ္စာ ဖေါက်မှုနဲ့ အသေရရ အရှင်ရရ အလိုရှိနေကြ တယ် ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေဆိုတာ အမေရိကန်တို. လိုက်နာစရာမလို ဘူး ၊ တခြားသူတွေက သာ လိုက် နာရမယ် တဲ့ လား?
ဒို.တိုင်းပြည်က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးသမား မစုကြည်က ဘာများပြောလို မလဲ မသိဘူး။ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း တွေ မှာတော့ ပစ်တင်ရှုံချဘို.ဆိုတာဝေးလို.ဘာမှ ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိ ။ သူများနိုင်ငံ အရေးဟာ သူနဲ မဆိုင် ဘူးလို.ပြောခြင်သလား မသိဘူး။ ဒီလိုဆိုရင်လဲ ကျမ တို. နိုင်ငံကိစ္စ ကျမတိုသာရှိပါ စေ ၀င်မပါကြပါနဲ့ လို. ပြောလိုက်ပါလား ဒေါ်အိမ်ကျယ် ရဲ့ ။ ဘာကြောင့် ကယ်ပါ ယူပါ တဆာဆာ အော်နေရတာလဲ?
မစုကြည်လို ပုဂိုလ်မျိုးကို သူကျွှန် ခံလိုသူ . ဒို.လူမျိုး ဂုဏ်စောင့်ဘို.နေနေ သာသာ အဖေ့ ဂုဏ် ကိုမှ မစောင့်သူ လို.ဘဲြေံပာ မယ် ၊ ပြည်သူတရပ်လုံး ကိုပါ သူတပါး ကျွန်ဖြစ်အောင် လုပ်နေသူလို. မြင်တယ် ။ မြေခွေး အမြီးပြတ် လို. မြင်တယ်၊ တခြားရှုဒေါင့့််က ပြောရ ရင် မစုကြည်ဟာ တောင်ပို.က ထွက် လာတဲ့ ဖွတ် ၊ တောင်ပို.ဟာ တောင်ပို.ဘဲ ဘုရားမဟုတ် ပါဘူး။ ဖွတ်လဲ ဖွတ် ဘဲ ဘုရား မဟုတ်ဘူး။ တချို.မြန်မာတွေ ဘုရားကိုး နတ်ကိုး မှားနေ ကြ သလား ?
အကောင်းနဲ့ အဆိုးဟာ ဒွန်တွဲနေတာမို. မြန်မာနိုင်ငံရဲ အကောင်းဖက် ၊ အဆိုးဘက်တွေကို ဖက်စုံ အောင် ပြည်စုံစွာ လေ့လာဘို.လိုတယ်။ ဖြစ်က တတ်စမ်းနဲ့ ပြီး ပြီးရော လုပ်လို.မရ ဘူးဆိုတာ လက်တွေ.ဘဲ မဟုတ် လား။ ဒါကြောင့်လဲ မြန်မာသမိုင်းကို လေ.လာကောင်း တယ် ၊ အတိတ်ကို လေ့လာ ကောင်းတယ်။
မစုကြည်ကိုလေ.လာရင်တောင် သူဟာ လူမျိုးခြားနဲ. တွေ.ရင် ရီလို.မောလို. ဖက်ရမ်း နမ်းရှုတ် လို. ဘယ် သွား သွား အတော့်ကို ဟန်ကျ နေပုံဘဲ။ မစုကြည် ဟာ သူတို. ရှေ.ရောက်ရင် ကြောက်စိတ်တွေဝင်ပြီး အမြီးကုတ် သွား သလား၊ ကြောက်စိတ်ပျောက်သွား သလားတော့ မသိဘူး။ မစုကြည် ဟာ အိမ်ကျယ် တယောက် ထက် ဘာမှ မပိုဘူး လိုတော့ ခန်.မှန်းမိတယ် ၊ သူအိမ်ထဲမှာဘဲ သူကျယ် နေတာ ။ အပြင်လူ တွေ အပေါ် မကျယ်ရဲပါဘူး။
ဒီလိုလေ.လာရာမှာ မြန်မာလူမျိုးတိုရဲ ပင်ကိုယ်သဘာဝတွေကို မေ့ဖျောက် ဂရုမစိုက်လို.မရဘူး။ မြန်မာတိုရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘာဝတွေနဲ့ မကိုက်ညီတာတွေ ဆန်.ကျင်တာတွေကို အဓမ္မသွတ်သွင်း လို.မရ သလို၊ ချောမော့ဖျာယောင်း ပြီး ဆွယ်တရားတွေနဲ့လဲ လုပ်လို.မရဘူး၊ ရရင်လဲ တာရှည် မခံဘူး ၊ သဘာဝ မတူတာ တွေ ဟာ ဘယ်လိုမှ ရေရှည် အစီး မကပ် ပေါင်းသင်းလိုမရ ဘူး ဆိုတာ Rocket Science နားလည်သူတွေ ဒင်မက ပုဇွန်ဆိပ် ဦးနှောက် ရှိသူ လူတိုင်း သိကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၃၇ ခု၊ ၁၉၄၈ ခု ၊ ၁၉၇၄ ခု ၊ ၂၀၁၀ ခု။ ဖွဲ.စည်းပုံ ဥပဒေတွေ မရှိခင် ၊ အင်္ဂလိပ် လက် ထက် အပါအ၀င်တုန်းက ဖွဲစည်းပုံ အခြေ ခံ ဥပဒေမရှိခဲ့ဘဲ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သူက သူနည်းသူ.ဟန်နဲ့ လက်ရူံး ရည် နှစ်လုံးရည် တို.နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ် ။ တိုင်းပြည်အဖြစ်သာမက မြန်မာ အင်ပိုင် ယာ ကိုတောင် တည် ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီနောက် ကိုယ့်ထက် လက်ရုံးအား ပိုကောင်းသူတွေကကိုယ်.ကို အနိုင်ယူ ၊ သူတို နယ်ချဲ.ခဲ့တဲ့ အင်ပါယာ မှာ ကိုယ့်တိုင်းကိုယ်ပြည် သူတိုပိုင် အင်ပါယာအတွင်း အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်း ခဲ့တာ ကိုခံရတယ် ။
လက်ခံသည် ဖြစ်စေ ၊ မခံသည် ဖြစ်စေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံမှ အသိ တရား နဲ့ စည်းလုံး တည်ထောင်ခဲ့ တာ မဟုတ် အဓမ္မ မဟုတ်သည့်တိုင် အကြောက်တရားနဲ့ တည်ထောင်ခဲ့ကြတာ ဆိုတာကို ကမ္ဘာသမိုင်း ကဖေါ် ပြထားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီနေရာမှာ သူများနဲ့မတူ ထူးခြားနေတဲ့ နိုင်ငံတခုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အင်ပါယာ တည်ဆောက်တယ် လို.ဘဲ ဆိုဆို. နယ်ချဲ့တယ် လိုဘဲ ပြောပြော၊ ဒီစံနစ်နဲ့ ဒီအကျင့် လူတွေရဲ အကျင့်နဲ လူတွေ
ရှိနေသမျှ ရှိနေမဲ့ စံနစ်ဘဲ။ ဒါဟာ ခုတိုင် လက်တွေ ကျင့်သုံးနေကြတုန်းဘဲ ဆိုတာ ထင်ရှားစွာ တွေ.နေရတယ် ၊ ကိုယ်က မလုပ်လဲ သူများက လုပ်နေ မှာဘဲ ၊ ကိုယ် မလုပ်ခြင်သည့်တိုင် သူများလုပ်တာ ကိုယ် မခံရဘို.၊ ကိုယ် ကိုကိုယ် ကာကွယ်ရေးအတွက် ကိုယ်လုပ်သင့် ကိုယ်လုပ်ထိုက်တာ တော့ လုပ်အပ် တယ် ၊ လုပ်ရ မှာဘဲ။
မြန်မာနိုငံမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ ? အမှန် ဖြေရရင် ဖြစ်နိုင်တာတွေ ၊ ဖြစ်ခြင်တာတွေ၊ မဖြစ်စေခြင်တာ တွေ အားလုံး ဖြစ်နေတယ်။ မဖြစ်ဘူးသေး တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာကတော့ မဖြစ်သေးဘူး ၊ ဈေးဆစ်နေကြ တုန်းဘဲ ၊ နောက်ဆုံး ဘယ်လောက်နဲ့ ဈေးတည်.မလဲ ဆိုတာ ကတော့ ကိုယ်လဲ မမှန်း တတ်ဘူး။ ဈေးတည့် သည့်ဖြစ်စေအုံး . နောက်ဆံတင်းပြီး တ ထိပ် တလန်.လန်.နဲ့ ကျီးလန်.စာ စားနေရသလိုဘဲ ရှိလိမ့် မယ် ၊ အထိ မခံ ရွှေပုဂံ တွေ ထစ်ကနဲ့ ဆို ထချကြအုံးမယ် ၊ လက်နက် မချဘူး ၊ လက်နက် မအပ်ဘူး ဆိုတာတွေ က ရှေ.အလား အလာ တွေကို ဖေါ်ပြနေတာသာဖြစ်တယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုလို Union တပ်တွေနဲ့ Confederate တပ်တွေ ပေါင်းသလို ၊ ဗီယက်နမ် က တောင်နဲ့မြောက် တပ်တွေ ပေါင်းသလို ပေါင်းနိုင်ဘို.အလားအလာက မဖြစ်နိုင် လောက်အောင်ဘဲ နဲ နေတာ တွေ.ရတယ် ၊ ဂျာမန် ၂ နိုင်ငံ ပေါင်းစပ်သလို. ကိုရီးယား ၂ နိုင်ငံ ပေါင်းစပ်ဘို.ဖြစ်နိုင်ပါ့ မလား? ဘယ်သူကရော တကယ်ပေါင်းစည်း စေခြင်သလဲ ?
လောလောဆယ် ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း ၁၉၄၇ ခု ပင်လုံညီလာခံတုန်းက အင်္ဂလိပ်လို.သြဇာ ညောင်းခဲ့ သလို အခုဆွေးနွေး ပွဲတချို.မှာ အမေရိကန် သံအမတ် မစ်ချယ် ၀င်ရှုတ် နေတယ်လို.သိရတယ် ၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း အမေရိကန်တပ်တွေမှာ ကချင်တွေ ၀င် အမှူ ထမ်းကြရင်း ဗိုလ် ချုပ်စလင်း ၊ ဗိုလ်ချုပ် ၀င်းဂါတ်တို.နဲ့ ပလူး ခဲ့ပြီး ဂျပန်နဲ့ဗမာကို တိုက် ခိုကခဲ့ကြဘူးတယ် . ဂျပန်ပြန်တော့ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်လိုတဲ့ ဗမာတွေ တရားခံဖြစ်ရတာပေါ့။
ကချင်ပြည်နယ်ဟာ မြန်မာ တရုတ် နယ်ချင်းဆက်နေတာမို. တရုတ် မလို လား တဲ့ အမေရိကန်တို.အဘို. တရုတ်ဆန်.ကျင်ရေး စစ်စခန်းတွေ ချဘို. အချက်အခြာမှာ မဟာ ဗြုဟာ နေရာ ဖြစ်နေတယ် ၊ ဒီနေရာနဲ့ အမေရိကန် တွေလဲ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းကဘဲ ဂဠုံ ဦးစော ကျေးဇူးနဲ ရင်းနှီးနေပြီး ဖြစ်တယ် ။ စိတ်ဝင်စားမယ် ဆိုလဲ ၀င်းစားစရာဘဲ ။
ကချင်တွေ ဘာကြောင် ဒါလောက် တောင့်ပြီး အမာခံ နေတယ် ဆိုတာလဲ သိသာတယ်။
၁၉၄၅ ခု စစ်ပြီးစ ပြန်လည် ဖွဲစည်းခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ် လက်အောက်ခံ ဘာမား အာမီ (ဗမာတပ်မတော်) ဆိုတာ မှာ စစ်ဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စမစ်ဒွန်း ( Smith Dun ) နဲ့ သူ.ရဲ လက်ထောက် ဗိုလ်မှုးချုပ် စောကြာဒိုး တို.ဟာ ကရင် တွေဖြစ်ကြတယ် ။ တခြား ကရင် အရာရှိတွေလဲ အထိကသော့ချက် ရာထူး နေရာတွေနဲ့ ဖြစ်တယ်။ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ တဦးပေါ် တဦး စိတ်ချယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဘို. ရည်ရွယ်ခဲ့ ခန်အပ်ခဲ့သည်တိုင် ၁၉၄၉ ခုမှာ ကရင် တပ်ရင်းတွေ လက်နက်နဲ့ တကွ KNU အဖြစ်နဲ့ တောခို ပုန်ကန် ကြတဲ့ အတွက် ကရင် ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ကရင် အရာရှိတွေ ကို အနား ပေး ခဲ့ရတယ် ၊ ပုလဲ ဆိပ်ကမ်း ရှိ အမေရိကန်ရေတပ်ကို ဂျပန် တိုက်တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာရှိတဲ့ ဂျပန်တွေ အကုန်လုံး ထောင် ထဲ ရောက် ကုန်တာလောက်တော့ မဆိုးပါဘူး ။ မြန်မာ နိင်ငံဟာ ကရင် နိုင်ငံတော် ဖြစ် ဘို. ၁၁၂ ရက်သာ လိုတော့တယ် လို.ပြောစမှတ်ရှိခဲ့တယ် ။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း နဲ့ သစ္စာရှိ လူမျိုးစုဝင် စစ်ဖက် ရဲဖက် ပြည်သူ.စစ် အရာရှိ အရာခံ အကြပ် တပ်သား တွေကို ကျေးဇူးတင်ရမယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး အရပ်ရပ် တည်ညိမ်မှု ဘာမှ မရှိသေးဘူး. အားရစရာ ဘာမှ မရှိဘူး ၊ တံလျှပ်ကို ရေထင်နေကြတာဘဲ ရှိတယ် ။ အခုလက်ရှိဟာ မတည်ညိမ်မှူုတွေ တည်ညိမ်သွားရင် ဘယ် လောက် ဇကာတင်ကျန်မယ် ဆိုတာ တွေ.ရမယ်၊ အင်္ဂလိပ်လို.ပြောရရင်တော့ Gold Rush, Land Rush တွေမှာ လူတိုင်းသူဌေး မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်က ကာလီဖိုးနီးယား Gold Rush မှာ ဌာနေတိုင်း ရင်းသား မဟုတ် တဲ့ လူမျိုးခြားတွေ ကြီးပွားကြတယ် ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ခွက်ပျောက်တယ် ။ ဒီနေ မြန်မာ နိုင်ငံ က Gold Rush မှာ ဘယ်သူတွေ ခွက်ပျောက်ကြ အုံးမ လဲ ? ထိခိုက် အနာတရ တွေ တော့ ရှိမှာဘဲ ။
အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရတခုဟာ အအုပ်ချုပ်ခံ ပြည်သူတွေကို ပျော်ရွှင် ကျေနပ် အောင်ထားနိုင်ဘို.ဆိုတာ မလွယ် ပါဘူး။ မြန်မာမှုမှာ သိကြားမင်း ကျွှဲယောင်ဖန်ဆင်းတာကို ပမာပြထားတယ် ။ အထူးသဖြင့် လောဘ ဒေါသ မောဟ များနေတဲ့ လူတွေနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို မျှတ အောင် လုပ်ပေးဘို.ဆိုတာ ခက် ပါတယ်။ မြန်မာ အများစု ဟာ ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တွေ ဆိုပေမဲ့ ဗုဓ္ဒဟော တဲ့ ဘယ်အပိုင်းကို ယုံကြည်လက်ခံကြတာလဲ? ဗုဓ္ဒ၀ါဒ ဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတခု မဟုတ် လောက သဘာဝကြီးကို သိဘို.၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုပြင် ထိမ်း သိမ်းဘို.၊ ကိုယ့်အ တွက် သူတပါးအတွက် လက်ရှိအကျိုး အနာဂါတ် အကျိုးခံစားရဘို.၊ လူဘ၀ ၀င်ဆန်.ဘို. လူဆော်နံ ဘို. လူပါးဝဘို.လမ်း ကြောင်း တွေ ကို ပြောထား တာဘဲလို. ရိုးရိုးလွယ်လွယ် မှတ်သားရဘူး တယ် ။
နောက်မှ ဆက် ဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ.